CAD / GIS-Teaching - Page 9 - Geofumadas
Tababar si loo abuuro adeegga moodada masaajidka
7 Koorasyada bilaash ah ee aagga Cadastre / GIS
Aad u qiimo badan oo ka mid ah toddobada koorsooyinka in la doono laga bilaabo waxtar leh, lacag la'aan ah oo inta badan online. codsiyada duwan Cadastral in Qeexid ee Urban Land Policy Online Course (free), is-dhexgal iyo degdeg ah oo looga golleeyahay in lagu dhiiri geliyo baaritaan muhiim ah nidaamka cadastral hadda deegaamada Latin American kala duwan ...
Qof dhowaan yimid weydiinaya meesha users of MicroStation ama Bentley codsiyada kala duwan caawimaad ka heli. Tani waa liiska wadahadal kala duwan forums, su'aalo iyo waxaa jira kuwa kale ka jawaabo: Users oo ku qoran luqado kale ama dalalka bentley.espanol (Spanish) bentley.mx (Mexico) bentley.general (English) bentley.general.de bentley.general.jp (Jarmal) bentley.general.fr (Faransiis) (Japanese) ...
Horaantii waxaan la hadlay oo ku saabsan sida Esenar AutoCAD ficil ahaan koorsada la mid ah sida wax baan ku bari dadka isticmaala MicroStation iyo waa in la qabsado habka dadka isticmaala ee Bentley ... had iyo jeer hoos fikradda ah in haddii uu qof ogaado 40 amarrada barnaamij computer ah yaabaa in loo tixgeliyo sida taliso. Dadka waa in ay bartaan in ay ogaadaan oo kaliya 29 Microstation ...
Markii hore waxaan u baro, oo ay ku jiraan AutoCAD loo isticmaalo; mar wax ku barayay labada shaqaalaha tacliinta yimid format sida qeexidda habka loo gargaaro Dadka oo waa in ay bartaan AutoCAD og amarrada kaliya 25, oo u dhow in ay 90% shaqada ee Civil Engineering waa. Amarradan 25, ...
Waxaan horay u soo bandhigay buug yar oo ArcGis iyo AutoCAD. Sannadkii hore waxaan isticmaalay Nidaam Manifold badan oo labadaba macaamiisha iyo horumarinta dalabka; Sababtaas ayaa iigu roonaaday mawduuca mawduuca. Wuxuu u sheegay in mid ka mid ah khasaarihiisa uu yahay inuusan isticmaalin wakiillada ...
ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, GIS kala cayncayn ah
Tani waa koorso dhamaystiran oo ka mid ah ArcMap, oo leh tusaalooyin iyo fiidiyowyo. maaddadu ay tahay wax soo saarka ee Hernán Rodrigo Retamal Norbega iyo Luis Muñoz kuwaas oo bilowday qorshahan ay ahayd markii hore ee Portugal iyo inkastoo layliyada waa versions 8, macquulka dil ay aad uma uu is beddelay. Marka hore ...
ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS